Dr. Tint Swe's Writings: November 2014
“ဆဌသံင်္ဃာရတနာတင်ကမ္ဘာအေးလိုင်ကူ။သာသနာကြီးဆက်လက်တည်တန့်ပွားများပါစေ” လို့ တင်ထားတာကို ဖတ်ရပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ သတ်ပုံပြင်စရာ (၃) ခုရှိပါတယ်။ (ဆဋ္ဌမ)၊ (သင်္ဂါယနာ) နဲ့ (လိုဏ်ဂူ) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အလွယ်ရှာတွေ့သမျှ (၁ဝ) နေရာမှာလဲ (သံဃာ) ကို (သံင်္ဃာ) လို့ မှားပေါင်းထားပါသေးတယ်။
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ သည်ဓမ္မစင်္ကြာတရားသီးဟောသောနေ့ ဖြစ်သလို ရတနာသုံးပါးတွင်တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်သော သံင်္ဃာရတနာ ...
... ဟောသောနေ့ ဖြစ်သလို ရတနာသုံးပါးတွင်တစ်ပါးအပါအ၀င်ဖြစ်သော သံင်္ဃာရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောနေ့ လည်းဖြစ်ပေ၏ ...
Jul 11, 2014 - ... သံင်္ဃာရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောနေ့ လည်းဖြစ်ပေ၏ ၀ါတွင်းကာလသည်ရဟန်းတော်များ မိုးလေးလပတ်လုံး ...
သံင်္ဃာရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောနေ့ လည်းဖြစ်ပေ၏ ၀ါတွင်းကာလသည်ရဟန်းတော်များ မိုးလေးလပတ်လုံး
Jul 28, 2010 - ၀ါဆိုလ တွင် ဘုရားရတနာ ၊ တရား၇တနာ သံင်္ဃာရတနာ သုံးပါးစလုံး
Jul 1, 2010 - ၀ါဆိုလ တွင် ဘုရားရတနာ ၊ တရား၇တနာ သံင်္ဃာရတနာ သုံးပါးစလုံး စတင်ပြည်စုံသောလဖြစ်သည် ၊
ဘုရား တရား သံင်္ဃာ ဆရာ မိဘ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ခွဲစိတ်မှုခံယူတဲ့ သံင်္ဃာ ၂ ပါးကတော့၊ မန္တလေး ရက္ခိဏာရာမ ဘုရားကြီးတိုက်က
အပြစ်ရှာတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါ။ ကျွန်တော်လဲ မှားတတ်တာတွေရှိပါတယ်။
မြန်မာစာကို အလေးထားဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားစို့။
အိန္ဒိယမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေခဲ့ကြပြီး၊ ဒီနိုင်ငံတခြားပြည်နယ်မှာရောက်နေကြတဲ့ မနိုးနီးနဲ့ သမီး မားသဲတို့ အိမ်အထိလာလည်ကြတယ်။ ကျန်းမာစွာတွေ့ရလို့ ဝမ်းသာကြရတယ်။
HIV and AIDS by the Numbers (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအိုင်ဒီအက်စ်) ကိန်းဂဏန်းများ
• ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လော့စ်အင်ဂျဲလိစ် က လူ ၅ ဦးမှာ HIV/AIDS (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအိုင်ဒီအက်စ်) ရောဂါရှိခဲ့တယ်လို့ ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ နှစ် ၃ဝ တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်တယ်။
• အဲဒီ ထုတ်ပြန်ချက်ကို HIV/AIDS ရောဂါရဲ့ ကနဦးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ အဲဒီကတည်းက HIV/AIDS ရောဂါကို လေ့လာဘို့ အတူးအဖွဲ့ကိုလဲ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။
• ၁၉၈၂ ဇူလိုင်လမှာ ဒီရောဂါလို့ နာမည်မတပ်ရသေးသူပေါင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တဝက်လောက်မှာ ပြန့်နေတဲ့ လူနာပေါင်း ရာဂဏန်း ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။
• အာရုံစိုက်ဘို့ ကောင်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်တွေကတော့ ဒီအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- ၃၃့၎ သန်း = ကုလသမဂ္ဂ UNAIDS နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတလွှား HIV ကူးစက်ခံနေရတဲ့ ယောက်ျား-မိန်းမအရေအတွက်၊
- ၅့၇ သန်း = ကုလသမဂ္ဂ UNAIDS ထုတ်ပြန်ချက်အရ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ တောင်အာဖရိက မှာ HIV/AIDS ရှိနေသူပေါင်း။
- ၂့၅ သန်း = ကမ္ဘာတလွှား HIV ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ သိထားရတဲ့ ကလေးစုစုပေါင်း၊
- ၁၉၅၉ = AIDS အစောဆုံးလူနာ၊ လူတဦးဟာ သွေးရောဂါ သုတေသနအတွက် သွေးလှူဒါန်းဘို့ ဆေးရုံကို လာခဲ့တယ်။ သူ့သွေးကို ၁၉၈ဝ ခုနှစ်ကျော်အထိ အေးခဲထားခဲ့တာမှာ HIV ရှိနေတယ်လို့ TheBody.com ကနေပြောခဲ့တယ်။
- ၁၉၈၁ = ပဌမဆုံး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ HIV ရောဂါစခဲ့တယ်။ အမေရိကားမှာ ဒီရောဂါ နာမည် တပ်တာ ပဌမဆုံးလို့ Avert.org ကနေပြောခဲ့တယ်။ ၁၉၈ဝ မတိုင်ခင် ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ AIDS ရာဇဝင်က မရေရာပါ။
- ၂၅ သန်း = ၁၉၈၁ မှာ ရောဂါနာမည် စတပ်ကတည်းက AIDS ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း၊
- ၅ဝ% = ၂ဝဝ၈ နှစ်ကုန်အထိ HIV ကူးစက်ခံနေရတဲ့ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီး ရာခိုင်နှုန်း၊
- ၈ဝ% = လိင်မတူဆက်ဆံတာကနေကူးစက်ခံနေရတဲ့ တကမ္ဘာလုံး HIV လူနာ ရာခိုင်နှုန်း၊
- ၃% = Avert.org အဆိုအရ ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာ ရှိတဲ့ HIV နဲ့နေထိုင်သူ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဝါရှင်တန်၊ ဒီစီ ကျန်းမာရေးဌန အဆိုအရ အနောက်အာဖရိကထက် HIV ရာနှုန်း မြင့်နေတယ်။
- ၆% = တောင်-ကာရိုလိုင်းနား ဆေးတက္ကသိုလ် လေ့လာချက်အရ ဆာဟာရ-အောက်ပိုင်းဒေသမှ HIV ကူးစက်ခံနေရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း၊
- ၁၇၂၃၇၇ = နယူးယော့ခ် မှာ AIDS ရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူ စုစုပေါင်း။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ကျန်ပြည်နယ်တွေထက် လူနာ အများဆုံးရှိတယ်။ ကာလီဖိုးနီးယားမှာ ၁၃၉ဝ၁၉၊ ဖလော်ရီဒါမှာ ၁ဝဝ၉ဝ၈၊ တက်ဆပ်စ်မှာ ၆၇၂၂၇၊ နယူးဂျာဆီမှာ ၄၈၄၃၁။ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး ဌာန CDC က ကိန်းဂဏန်တွေ ဖြစ်တယ်။
- ဒေါ်လာ ၅့၆၇ ဘီလျန် = AIDS, TB နဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါတွေ တိုက်ဖျက်ဘို့ (ဂလိုဘယ်-ဖန်း) ကနေ ထောက်ကူတဲ့ ရံပုံငွေ၊ Avert.org အဆိုအရ Global Fund ဟာ AIDS ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အကြီးဆုံး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။
- ၄ သန်း = Avert.org အဆိုအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဘို့လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ HIV အသက်ကယ်ဆေး ရရှိနေတဲ့ အရေအတွက်၊
- ၉့၅ သန်း = ဖွံ့ဖြိုးဆဲနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဘို့လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ HIV အသက်ကယ်ဆေး ရရှိဘို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ အရေအတွက်၊
• ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ကို AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရံပုံငွေရှာဘို့၊ တလွဲအယူအဆတွေကို ပယ်ဖျက်ဘို့နဲ့ အသိပညာတိုးတက်စေရေးတို့အတွက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက သတ်မှတ်ကျင်းပနေခဲ့တယ်။
• HIV ဆိုတာ ပျောက်မသွားသေးဘူး။ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကို လူအများကို သိစေအောင် လုပ်ရလို့ ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့က အရေးကြီးတယ်။
• UNAIDS ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ကလေး ၂့၅ သန်း အပါအဝင် လူပေါင်း ၃၃့၃ သန်းမှာ HIV ပိုး ရှိနေကြတယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တုံးက လူနာသစ် ၂့၆ သန်းထပ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၁့၈ သန်း ဒီရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။
• ဒီရောဂါ ဖြစ်သူထဲက တကယ့် အများစုကြီးဟာ ဝင်ငွေနည်း၊ ဝင်ငွေ အလယ်အလတ်သာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက ဖြစ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ HIV ဟာ နိုင်ငံတိုင်းက ယောက်ျား-မိန်းမ-ကလေး အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက် နေတာပါ။
• World AIDS Day theme ကတော့ Universal Access and Human Rights “အားလုံး လက်လမ်းမီရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်တယ်။
• ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက HIV/AIDS ကုသရေး၊ ကာကွယ်ရေး ဆိုတာ “လူ့အခွင့်အရေး” အဖြစ် လက်ခံကြပြီး၊ HIV/AIDS နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို လက်လှမ်းမီဘို့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့၊ လုပ်စရာတွေ တလှေကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ ဝင်ငွေနည်း နဲ့ ဝင်ငွေအလတ်စားရှိ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီရောဂါဆေး ARV ကို လူဦးရေ တဝက်တောင်မှ မရနိုင်ကြသေးဘူး။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လူသန်းများစွာ ကူးစက်ခံနေရဆဲ ဖြစ်လို့ပါ။
• သင် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ အနီရောင် ဖဲပြားလေး ဝတ်ထားပြီး အသိပညာဖြန့်ပေးပါ။
• အနီရောင် ဖဲပြားလေးဟာ နိုင်ငံတကာ AIDS ရောဂါ အသိကြွယ်စေဘို့ စာနာစိတ်နဲ့ လူတိုင်း ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ဖြစ်တယ်။ သူများတွေကိုလဲ HIV ကို စိုးရိမ်စေဘ်ို့၊ ကူညီကြဘို့၊ ပါဝင်လာကြဘို့ တိုက်တွန်းရာ ကြစေတယ်။
• အနီရောင် ဖဲပြားလေးကို ဘယ်သူကမဆို အလွယ်တကူ ကိုယ်တိုင် လုပ်ပါ။ တရားဝင် ပြုလုပ်သူဆိုတာ မရှိပါ။
• တကယ်လို့ ဒိထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် နီးစပ်ရာ အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ပါ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ တီထွင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
HIV ပိုးကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်က စတွေ့ခဲ့ပြီး၊ HIV/AIDS ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပြုနေဆဲ ကပ်ရောဂါ Pandemic diseases တွေထဲက တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ Retroviridae အုပ်စုဝင် ဖြစ်ပြီး HIV-1 နဲ့ HIV-2 ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ HIV-1 ဟာ ပိုမို ပြင်းထန်တယ်၊ ကူးစက်လွယ်တယ်။ ကူးစက်ခံရရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ခုခံမှုစနစ် Immune System မှာရှိတဲ့ CD4 Cell (Helper T Cells) ကို အဓိက ကူးစက် ဖျက်ဆီးတယ်။ ကူးစက်ခံရတဲ့ CD4 Cell တွေကို CD8 Cell တွေက ရန်သူပိုးမွှားလို့ ထင်မှတ်ပြီး မှားယွင်း တိုက်ခိုက်လို့ CD4 Cell တွေ လျော့နည်းစေတယ်။ ကျန်းမာတဲ့လူမှာ CD4 Cell အရေအတွက် 1200 cells/μl ရှိတယ်။
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ ဆိုတာ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရလို့ ရလာရတဲ့ “ရောဂါလက္ခဏာ အစုအပေါင်း” ဖြစ်တယ်။ လက္ခဏာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဘူး။ Opportunistic infections အခွင့်သာလို့ ဝင်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့် အသက် အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်စေတယ်။
HIV ပိုးဝင်ပြီးနောက် ဆေးမကုသူတွေမှာ ၈-၁ဝ နှစ်ကြာမှ AIDS ဖြစ်လာတယ်။
၁။ ပိုးရှိသူ နှင့် လိင်တူ-လိင်ကွဲ ဆက်ဆံခြင်း၊ လူနာ ၉ဝ% က လိင်ဆက်ဆံရာက ကူးတယ်။ ၆ဝ-၇ဝ% က လိင်တူဆက်ဆံလို့ ကူးတယ်။
၂။ ပိုးပါတဲ့ သွေးသွင်းခြင်း (၉ဝ% ကျော် ကူးနိုင်စွမ်းရှိတယ်)၊ ပိုးရှိသူနဲ့ ဆေးထိုးအပ် ဆေးထိုးပြွန် မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ တကတူး ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခြင်း၊ ဓါတ်အပ် စိုက်ခြင်း၊ ကွင်းတွေတပ်ဆင် အလှပြင်ခြင်း၊
၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်က ကလေးကို ကူးစက်ခြင်း (၁၅-၃ဝ%) တို့ ဖြစ်တယ်။
(၁) ဘာ ရောဂါလက္ခဏာမှ မရှိသေးတာ။
(၂) သာမန်အရေပြား၊ အရေပြားနု၊ အသက်ရှူလမ်း အပေါ်ပိုင်းတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိလာတာ။
(၃) ဝမ်းခဏခဏ၊ အကြာကြီး (၁ လ) လျှောတာ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်တာ၊ နူမိုးနီးယား၊ အဆုပ်တီဘီ ဖြစ်လာတာ။
(၄) ဦးနှောက်မှာ Toxoplasmosis ရောဂါ၊ အစာမြိုပြွန်-လေပြွန်-အဆုပ်မှာ Candidiasis မှိုရောဂါ၊ Kaposi's Sarcoma ရောဂါ ဝင်လာတာ။ ဒီလိုရောဂါတွေက လူကောင်းတွေဆိုရင် ကုသရတာလွယ်တယ်။ CD4 positive T cell count အရေအတွက်က 200 per mm3 of blood ထက်နည်းမယ်။ WHO ကနေ Antiretroviral (ARV) therapy ဆေးကုဘို့ ညွှန်းတယ်။
• HIV ကို လုံးဝ ပျောက်ကင်း စေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါး ယခုအချိန်ထိ မပေါ်သေးပါ။
• HIV ပိုးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေဘို့၊
HIV antibody ကို အလျှင်အမြန် စစ်ဆေးပေးတဲ့ ကိရိယာ (Rapid HIV test) ကို အလွယ်တကူ ရနိုင်တယ်။ အခြား စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ စမ်းသပ်နည်းတွေကတော့ ELISA, Western Blot နည်းတွေ ဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင် ပြီးချိန်က HIV antibody စစ်ဆေး တွေ့ရှိချိန်ထိ ကာလကို Window period လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီကာလမှာ HIV ကူးစက်ခံရမှန်း မသိနိုင်တဲ့အချိန် ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကိုတော့ ကူးစက်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ ၉၉% သော HIV ကူးစက် ခံရသူများဟာ ၃ လ အကြာမှာ HIV antibody စစ်ဆေး တွေ့ရှိနိုင်တယ်။
ရောဂါပိုး ဝင်ခါစမှာ သွေးစစ်ရင် ချက်ချင်း မပေါ်ဘူး။ HIV antibody test ကို စစ်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) လ မတိုင်ခင်က အခြေအနေကိုပဲ ပြတယ်။ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင် မပြုမီမှာလဲပဲ နှစ်ယောက်လုံးက သွေးစစ် သင့်ကြတယ်။
HIV/AIDS ရောဂါ အကောင်း-အဆိုး သိချင်ရင် စမ်းသပ်တဲ့ နည်းတခုကို CD4 (Cluster of differentiation 4) လို့ ခေါ်တယ်။ အလွယ်ခေါ် T4 count; T-helper cells; T-suppressor cells; Cytotoxic T-cells နဲ့ တရားဝင် အခေါ်က CD4 lymphocyte count; CD8 lymphocyte count; CD4/CD8 ratio; CD4 percent ဖြစ်တယ်။
လူတိုင်းမှာ ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ (ဆဲလ်) တွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ Lymphocyte ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတမျိုး ပါတယ်။ HIV ပိုးဝင်လာရင် T-cells ကို တိုက်ခိုက်တယ်။ CD4 က T cells ထဲကို HIV-1 ဝင်လာစေဘို့ “ဧည့်ကြို” တာဝန် ယူသလို ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ (ဆဲလ်) တွေကို အသုံးချပြီး၊ ပုံတူပွါးတာမို့ ခုခံအားစနစ်ကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်စေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ (ဆဲလ်) တွေ နည်းနေတာဟာ ခုခံစွမ်းအားတွေ ကျဆင်းတယ်လို့ သွယ်ဝှိုက်ပြီး ပြောတယ်။
HIV ရှိရင် CD4 အရေအတွက် ကျဆင်းတယ်။ ARV ဆေးပေးပြီးနောက် နလံထမှာ တခါ ပြန်တက်လာတယ်။ CD4 နဲ့ Viral load (VL) ဆက်စပ်နေတာ ရှိသလို တခါတလေ အဲလို မဟုတ်တာလဲ တွေ့နေရတယ်။ ၁ဝ% လောက်မှာ VL ကျနေပေမဲ့ CD4 မတက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် CD4 တုံ့ပြန်မှု မရှိတာနဲ့ ဆေးကုတာ မထိရောက်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ Viral load (VL) က CD4 လောက်တော့ မတိကျပါ။
လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုတိုင်း Latex condom (ကွန်ဒွမ်) ကို စနစ်တကျ သုံးခြင်းဟာ HIV ကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ တခုထဲသော အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်တယ်လို့ UNAIDS, WHO, UNFPA ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေက ထောက်ခံချက် ပေးထားတယ်။ ၉၈% ထိရောက်တယ်။ (ကွန်ဒွမ်) ကို ရည်ရွယ်ချက် ၂ ခုအတွက် သုံးရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရမှာကို တားဘို့နဲ့ HIV အပါအဝင် STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်မဲ့ (ဆစ်ဖလစ်၊ ရေယုံ၊ ကလာမိုင်ဒီးယား၊ ဂနိုရီးယား၊) ရောဂါ မှန်သမျှတွေကို ကူးစက်မလာအောင် ကာကွယ်ဘို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Genital warts လိင်လမ်း ကြွက်နို့ နဲ့ Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံတွေကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ဘူး။
Latex condoms ဆိုရင် ချောဆီ မလိုပါ။ မဟုတ်ရင် Water-based lubricants ရေအခြေခံ-ချောဆီကိုသာ သုံးပါ။ K-Y Jelly က အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ ဆီအခြေခံ Oil-based lubricants, Petroleum jelly, Vaseline (ဗက်ဆလင်း)၊ Hand lotion, Baby oil ကအစ တခြား ဘယ်ဆီ အမျိုးအစားကိုမှ မသုံးရပါ။ Silicone lubricant က အဝတ်အစားကို စွန်းထင်းစေတယ်။
ကိုယ်ဝန် မတားနိုင်တာ၊ ရောဂါ မတားနိုင်တာ ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာ သုတေသန ရလဒ်တွေ မတူကြပါ။ (ကွန်ဒွမ်) အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေး၊ စွပ်နည်း-ချွတ်နည်း၊ အချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးတာ ဟုတ်-မဟုတ်၊ (ကွန်ဒွမ်) မသုံးခင် ကတည်းက ရောဂါ-ကိုယ်ဝန် ရှိနေ-မနေ၊ စတာတွေပါ ထည့်စဉ်းစားရတယ်။
အပိုလုပ်ပေးထားတဲ့ အရောင်၊ အနံ့ စတာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။ Latex condom ကို အများဆုံး သုံးတယ်။ သူနဲ့ မတည့်သူတွေက Polyurethane Condom သုံးရတယ်။ Female Condom အမျိုးသမီး သုံးလဲ ရှိတယ်။ Polyurethane နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ကွင်း ၂ ခုပါတယ်။ Invisible Condom မမြင်နိုင်တဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဆိုတာ ကနေဒါမှာ ထုတ်လုပ်ဘို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အရည်တမျိုးကနေ Barrier gel ဖြစ်လာစေပြီး အကာကွယ် လုပ်ပေးမှာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးတွေကိုရော သုတ်ပိုးကိုပါ သေစေမယ်။ Spray on Condom ဆေးပန်း (ကွန်ဒွမ်) ကို ဂျာမနီမှာ စမ်းနေတယ်။ တချို့ (ကွန်ဒွမ်) တွေမှာ Spermicide သုတ်ပိုးသေဆေး ပါတယ်။ Foam ဒါမှမဟုတ် Cream အနေနဲ့ သုတ်ထား ပေးတာမျိုး။ ကိုယ်ဝန် မရမှာကို ပိုသေခြာအောင် လုပ်တာပါ။
ရောဂါကာကွယ်ဘို့ သုံးသူက (ကွန်ဒွမ်) အသစ်လဲရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ သုံးသူဆိုရင် အရေးပေါ်တားနည်း Emergency contraceptive (EC) လုပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တခုခု သုံးနေသူတွေလဲ တကယ်လို့ ကိုယ့်အဖေါ်ရဲ့ အကြောင်း မသိရင် ရောဂါတွေ ကာကွယ်ဘို့ (ကွန်ဒွမ်) ကိုပါ သုံးရပါမယ်။ တကယ်လို့ HIV ပိုးရှိနေသူနဲ့ ဆက်ဆံနေရင်း (ကွန်ဒွမ်) ပေါက်ပြဲသွားရင် Antiviral therapy ဆေး သောက်ရပါမယ်။
• ပိုးရှိသူရဲ့ သွေးနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့ အရေပြားမှာ ပွန်းပဲ့တာ မရှိရင်တော့ အရေပြားကို ဖောက်ပြီး မဝင်နိုင်ဘူး။
HIV positive ကိုယ်ဝန်ဆောင်
HIV ပိုးရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ ကလေးကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ၁၅-၃ဝ% ရှိတယ်။ ကူးနိုင်တဲ့ နည်းတွေက -
(၂) မွေးဖွါးဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေတုံး (၁ဝ-၂ဝ%) နဲ့
(၃) နို့တိုက်နေတုံး (၁ဝ-၁၅% ထပ်ဆောင်းတယ်) ကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး အချင်းကနေ သန္ဓေသားဆီ များသောအားဖြင့် မရောက်ပါ။ မိခင်က ကျန်းမာရေး ကောင်းနေရင် အချင်းက အကာကွယ် ပေးရာတောင် ကျသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၁) မိခင်လောင်းက အစာအာဟာရ ကောင်းကောင်း စားဘို့ လိုတယ်။ (၂) တခြားရောဂါ (ငှက်ဖျား၊ တီဘီ၊ ဆီးအောင့်၊) မဝင်အောင် ဂရုစိုက်ရမယ်။ (၃) မိခင်က HIV ဆေးကုနေရင် ကလေးကို ကူးစရာအခွင့်အလမ်း ၂% သာရှိလို့ ဆေးကုပါ။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့ သား-အမိကို ချက်ချင်း ဆေးကုရမယ်။ ARV (Nevirapine or Zidovudine) ဆေးပေးရမယ်။ Nevirapine ဆေးကို မွေးဖွါးနေတဲ့မိခင်ကို တလုံး၊ ကလေးကို ၇၂ နာရီအတွင်း ၁ လုံးပေးရမယ်။ Zidovudine ဆေးကို ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေတုံး မမွေးခင် ၆ လမှာ ပေးထားရင် ကူးစက်တာ နည်းစေတယ်။
အမေရိကားမှာ ဒီဆေးကို စသုံးခဲ့ပြီး၊ အခု တခြားဆေးနဲ့ တွဲပေးနေတယ်။ ဆေးကို ကိုယ်ဝန် ၃ လနောက်ပိုင်းမှာ ပေးတယ်။ ဘာအကာအကွယ်မှ လုပ်မထားရင် ကလေးဖွါးနေတုံးမှာ မိခင်ကနေ ကလေးကူးဘို့ ၁ဝ-၂ဝ% ရှိတယ်။ သွေးနဲ့ ရေမြွှာရည်နဲ့ ထိရင် ကူးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရေမြွှာအိတ်ကို စောပြီးဖေါက် မွေးမပေးရဘူး။ Episiotomy မွေးလမ်းချဲ့ မွေးတာလည်း ရှောင်ရမယ်။ LSCS ခွဲမွေးနည်းက ကူးစရာလမ်း နည်းစေတယ်။
၁။ အခြေအနေမှန်ကို ရှင်းရှင်း သိနေကြအောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါ။ စိုးရိမ်တာ ရှိသမျှ ထုတ်ပြောပါ။ တယောက် အပေါ် တယောက် ရိုးသားပါ။ ကိုယ်ထင်တာကို တရားသူကြီးလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မချပါနဲ့။
၃။ HIV အကြောင်း ကျန်းမာရေး-လူမှုရေး သုတတော့ လေ့လာထားကြပါ။ တိတိပပ ပြောပါ့မယ်၊ “သွေး၊ မိခင်နို့၊ ကျား-သုတ်ရည်၊ မ-ဗဂျိုင်းနားက အရည်၊ ” ဤလေးမည်ကနေသာ ကူးပါတယ်။ လက်ခြင်းထိ၊ ပါးခြင်းအပ်၊ ကျောခြင်း ကပ်ယုံနဲ့ လုံးဝမကူးပါ။ သွားထိလို့ ဓါတ်လိုက်မှာလား ကြောက်စရာ မထားပါနဲ့။ စာအတူ ဖတ်ပါ၊ တီဗွီအတူ ထိုင်ကြည့်ပါ။ ထမင်း တစားပွဲထဲ ထိုင်စားပါ။ ညောင်းလို့ နှိပ်နင်းပေးလဲ ရောဂါ မရပါ၊ ကုသိုလ်သာ ရပါမယ်။
၄။ သူ့ အတွင်းရေး-လုံခြုံမှုကို လေးစားပါ။ တစိမ်းတရံတွေကို “သူကရောဂါသည်” လို့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့၊ နှိမ်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ မပြောပါနဲ့။
၅။ စည်းကမ်း-ကလနား သတ်မှတ်ထားပါ။ ကိုယ့်ပစ္စည်း လာသုံးတာကို အပြတ်ငြင်းပါ၊ အားမနာပါနဲ့။ ဆောရီး လောက်နဲ့ မရပါ။ ပိုးရှိသူကနေ ချတဲ့ စည်းကမ်းကိုလည်း တခြားလူတွေက လိုက်နာကြပါ။
ဒီလိုရောဂါအတွက် အင်မတန် စိတ်ထားမြင့်တဲ့ “ဆိုရှယ်-ဝပ်ကားစ်” တွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေမှ မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံလှည့်ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး၊ ရောဂါကာကွယ်ရေး အသိပေးသူတွေ မနည်းပါ။
၁။ ကျွန်မရဲ့သားက အသက် ၅ နှစ် ၂ လရှိပါပြီ။ နှာခေါင်းသွေးယိုလို့ ဆေးခန်းပြ သွေးစစ်တာ factor 8 ကနည်းနေတယ်။ 27% ဖြစ်နေတယ်ပြောပါတယ်။ နောက်တကြိမ်ထပ်စစ်ထားပါတယ်။ နောက်တကြိ်မ်မှာလည်းနည်းနေရင် ရိုးတွင်းခြင်စီ စစ်မယ်ပြောပါတယ်ရှင်။ အဲဒါဘာရောဂါကိုသံသယရှိလို့စစ်တာပါလဲရှင်။ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါလားရှင်။
၂။ ကျွန်တော်ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၂ဝဝ၉ မှာ ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ရောင်ပြီး နီလာပါတယ်။ ထိမရအောင် နာပါတယ်။ ဒါနဲ့သွေးဌာန ရန်ကုန်မှာ တက်ပြီး ဆေးကုသပါတယ်။ သွေးမတိက်ရောဂါ factor 8 နည်းတဲ့ရောဂါဖြစ်လို့ သွေးဖြူအိတ် cryl 80 အိတ်လောက် သွင်းရပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရအောင်နေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဟိုနားဒီနား ယာင်ပြီး နီလာရင်တော့ Pause 500mg နဲ့ kstat 500mg ကိုသောက်ရပါတယ်။ လျှာနဲ့လည်ပင်းမှာဖြစ်ရင်တော့ factor 8 ထိုးဆေး ထိုးရပါတယ်။ လူပင်ပန်းငွေကုန်းကြေးကျများတာမို့ ဘာဆေးကို ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ၊ ဈေးအနည်းဆုံးနဲ့ ဘာဆေးကို ထိုးရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဘာဓာတ်စာစားရင် သွေးမတိက်ရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ဦး (့)၊ အသက် ၆ဝ။
Factor VIII (ဖက်တာ ၈) ဆိုတာ သွေးရောဂါတမျိုးဖြစ်တယ်။ သွေးဆိုတာ သွေးကြောထဲကနေထွက်ရင် ခဲရမယ်။ သွေးခဲစနစ်ထဲက အဌမမြောက် အချက်တခုနည်းနေရင် (ဟီမိုဖီးလီးယား) ဆိုတဲ့သွေးရောဂါရတယ်။ ဒါကြောင့် Anti-hemophilic factor (AHF) လို့ပါခေါ်တယ်။ ဒီရောဂါဟာ Genetics မျိူးဗီဇစာရင်းဝင် ဖြစ်တယ်။ ရောဂါရှိနေသူကို သွေး (သွေးရည်ကြည်) လှူထားတာထဲကနေ အထူးထုတ်ယူထားတဲ့ FVIII concentrated နဲ့ Recombinant FVIII ဆိုတာ သုံးနိုင်တယ်။ သွေးလက်ခံယူနေရတာမို့ လူနာအတွက် Hepatitis B and C နဲ့ HIV တွေ ကူးမလာအောင် သတိထားရတယ်။ နောက်ပြီး Antibody ဖြစ်လာမှာလဲကြည့်ရတယ်။
1. အမေရိကားမှာ ယောက်ျားလေးမွေးသူပေါင်း ၅ ထောင်ကနေ တသောင်းရှိရင် ဒီရောဂါရှိသူတယောက်ပါတယ်။ သူတို့ထဲက ၅ဝ-၆ဝ% က severe hemophilia A (FVIII-C < 2% of normal) ဆိုးတယ်။ bleeding manifestations သွေးယိုတာအမျိုးမျိုး ခံစားရမယ်။
2. ၂၅-၃ဝ% က moderately severe hemophilia (FVIII-C of 2-5%) အသင့်အတင့်ဆိုးတယ်။ သာမန်လောက် ထိခိုက်မိရင် သွေးယိုမယ်။
3. ၁၅-၂ဝ% က mild hemophilia A (FVIII-C of 6-30%) သိပ်မဆိုးဘူး။ ဒဏ်ရာကြီးမှသာ သွေးယိုမယ်။
4. ယောက်ျားတွေမှာ ရောဂါခံရပြီး မိန်းမတွေကရှားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါသယ်ပို့ပေးနေသူ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Acquired hemophilia A ဆိုတာက မွေးရာပါမဟုတ်ဘဲ နောက်မှ autoantibody to factor VIII ကြောင့် ရောဂါ ရလာတာဖြစ်တယ်။ လူတသန်းမှာ တယောက်ရှိတယ်။ ကျားရော၊ မပါဖြစ်တယ်။ အလားတူ ခပ်ဆင်ဆင် ရောဂါတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ Factor II, Factor IX, Factor V, Factor VII, Factor XI, Hemophilia, Overview နဲ့ von Willebrand Disease ဖြစ်ကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာကတည်းက အထဲကကလေးမှာ ဒီရောဂါရှိနေ-မနေ စစ်လို့ရတယ်။ ၁ဝ-၁၆ ပတ်မှာ စစ်တယ်။
အဆစ်တွေထဲသွေးယိုလို့ ရောင်မယ်၊ နာမယ်၊ ခါတိုင်းလို မလှုတ်ရှားနိုင်ဖြစ်မယ်။ ကြွက်သားတွေထဲ သွေးယိုနေရင်လဲ အတူတူဘဲဖြစ်မယ်။ ဒဏ်ရာရပြီး၊ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် တဖြေးဖြေးမှ သွေးယိုမယ်။ ဆီးထဲသွေးပါမယ်။ ဝမ်းထဲသွေးပါမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ အာရုံကြောလက္ခဏာတွေခံစားရမယ်။ သွေးခြည်ဥ၊ သွေးကြောတွေ ဖြာထွက်နေမယ်။ အသားဝါ၊ ဘေလုံးကြီး၊ အသဲရောင်၊ အသဲခြောက်။ အားကုန်နေမယ်၊ အစာမစားချင်ဘူး။ ပိန်မယ်။ ကူးစက်ပိုးဝင်တာခံရမယ်။
လူနာအဖို့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျပိုင်းတွေမှာ ခံစားကြရတယ်။ ဒုက္ခပိုဝယ်သလိုမဖြစ်အောင် HIV ကိုပါ သတိထားရမယ်။
ဒီရောဂါရှိနေမှတော့ အကောင်းဆုံး ငါဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲကိုသာ ဦးတည်ရမယ်။ ဆင်ခြင်စရာတွေ ဆင်ခြင်ပါ။ သွေးသွင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာသာ နေထိုင်ပါ။ သွေးသွင်တာမှာ ဂရုစိုက်ပါ။ ဓါတ်စာရယ်လို့မရှိပါ။ သွေးအားကောင်းစေတဲ့ အစားအစာကို စားပေးရင် အထောက်အကူတော့ရမယ်။ ဆရာဝန်တွေကုသနည်းကလွဲရင် တခြားအားမကိုးသင့်ပါ။
• သည်နေရာဝရံတာမှာ လူနာစာအုပ်လေးတွေ အစီအစဉ်နဲ့တင်၊ ဆေးတွေလဲပြင်ပြင်ဆင်ဆင်၊
• အထဲကုတင် စမ်းသပ်နေတဲ့လူနာတွေတင်၊
• လာသမျှ ကုသပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်။
• ဆေးခန်းကို ဦးစီးဆောက်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်း လေဖြတ်နေတယ်လို့ မကြားချင်တဲ့သတင်းလဲဝင်၊
• ဆေးခန်းမှာ လာကူပေးနေခဲ့တဲ့နှမ လူ့လောကကိုစွန့်ခွါသွားတဲ့သတင်းကအရင်။
• ဆေးတွေပျယ်နေတဲ့ဆေးခန်း ဆေးစွမ်းမထင်၊
• ရေမန်းတောင်မပေးသာလို့ လေမန်းနဲ့ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးပညာကိုငါသင်ချင်။ ။
• ကနေ့မနက် RFA တနင်္ဂနွေစကားဝိုင်းမှာ ဦးကိုနီ၊ ဦးသိန်းသန်းဦးတို့နဲ့အတူ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
• ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့ ပန်းခြောက်ပွင့်ကတော့ အငုံအဖူးလေးအဆင့်မှာ သမတဆီကရေမရ၊ ကာချုပ်ဆီကလေမရတာနဲ့ ပွင့်နိုင်ရှာတော့မယ် မထင်ပါ။
• မျိုးမှန်ရင် တနေ့ရှင်သန်လာရမယ်လို့ အားခဲနေဆဲပါဗျာ။
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မက ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ကျော်ပါပြီ။ ကလေးကတခါတလေအရမ်းလှုပ်ပါတယ်။ တခါတလေလဲ အရမ်းငြိမ်နေပါတယ်။ တခါတလေဆို ဗိုက်ကအရမ်းကို တင်းနေတက်ပါတယ် ဆရာ။ ကျွန်မက ကလေးပုံမှန်ဖြစ်ရဲ့လား စိတ်ပူနေလို့ပါ။ ပြီးတော့ မနေ့က shopping mall သွားရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ show ပွဲတစ်ခုနဲ့တိုးတော့ အရမ်း ဆူညံသံတွေကြောင့် ကလေးရဲ့ အကြားအာရုံများထိခိုက်သွားနိုင်ပါသလား ဆရာ။ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းလန့်ပြီး နှလုံးတွေများ ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာ။
မပူပါနဲ့။ ကလေးလှုတ်လေကောင်းလေပါ။ တနေကုန်မလှုတ်ရင်တော့ ဆရာဝန်ပြပါ။ အပြင်ကအသံဆူတာအတွက်လဲ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ မခင်လောင်းက စိတ်ကို အပြုသဘောဆောင်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင်။
၂။ ဓါတ်ပုံရုိုက်တာ ကလေးကို ဘာတွေထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဆရာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုန်း ဓါတ်ပုံ မရုိုက်ကောင်းဘူးလို့ လူကြီးတွေပြောတာ ကြားဖူးနေလို့ပါဆရာ။
ဓါတ်မှန်မဟုတ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါ။ အရင်ပေါ်ကင်မရာတွေမှာ သဘာဝအလင်းရောင်သာ သုံးတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်မပါ၊ အသံလှိုင်းမပါ၊ လျှပ်စစ်မပါ။ ခေတ်ပေါ် ကင်မရာ၊ ဖုန်းနဲ့တွဲထားတဲ့ ကင်မရာတွေကလဲ ကွန်ပြူတာနည်းသာသုံးတယ်။ အာလ်ထွာဆောင်းလဲ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
(မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်ပုံက အထဲမှာ သွေးကြောခုန်သလိုဖြစ်တယ်။ ကွက်ပြီး ထိုးကိုက်တယ်။ နာတာကလဲ တမျိုး၊ တဖက်ထဲကနာမယ်။ ပျို့-အန်ချင်မယ်။ အလင်းရောင်ကို မကြည့်နိုင်ဘူး။
နယူးယော့ခ်မှာရှိတဲ့ Montefiore Headache Center ကနေ သုတေသနလုပ်သူ Matthew Robbins ပြောတာက "အနံ့ကနေ တချို့မှာ အဲလို (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါလာဖြစ်ကြတယ်။" “အဖြစ်များလှတော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သိသာတယ်။ အဲလို တကယ်အနံ့မရဘဲ ရတာမျိုးကို Olfactory hallucinations ခေါ်တယ်။”
• အိမ်မိုး နံရိုးသာ၊
• အိမ်အကာ ဗလာ၊
• ဆိုင်းဘုတ်မှာ နာမည်မပါ၊
• သစ်ပင်အုပ်ဆိုင်းတာ တောရိုင်းမဟုတ်ပါ၊
• လူဝင်လူထွက် မလုပ်သာပေမဲ့ လေဝင်လေထွက်ရှိလျှက်ပါ။
• အဲတာ ငါနေခဲ့တဲ့နေရာ၊
• ငါကုသပေးတဲ့လူနာတွေ လာကြတဲ့နေရာ၊
• နိုင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ စံပျော်ရာ၊
• ငါ့ကိုမဲပေးကြသူတွေရဲ့ မျှော်မှန်းရာ။
• လူမလာပေမဲ့ နေ့တိုင်းညတိုင်း စိတ်ရောက်လာ၊
• အထိန်းအမှတ်ဟာ ဘယ်သောအခါမှမပျောက်ပါ၊
• လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့မဖြေသာ၊
• တမ်းတသူတွေကိုတော့ အားပေးမပျက်ပါ၊
• ကျန်းမာ-ချမ်းသာ၊ တနေ့မှာပြန်ဆုံကြမယ်ဗျာ။ ။
ပုလဲအိမ်လေးရဲ့ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ပို့ပေးတဲ့ မုံရွာ-မန္တလေးက့့ ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသိ ညီလေးတစ်ယောက်ပါဆရာ။ အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ရွစိရွစိ သွားနေသလို ခံစားရတယ်လို့ အမြဲပြောတယ်ဆရာ။ ခုနောက်ပိုင်း လည်ချောင်းထဲထိ တက်လာသလို ခံစားရတယ်လို့ ထပ်ပြောလာပါတယ်။ တစ်နေ့ ထမင်းငါးထပ်စားပါတယ်။ ၁ နာရီခွဲတစ်ခါ ဆိုသလို ဗိုက်အရမ်း ဆာလောင်တက်တယ်။ စားသလောက် အသားမဖြစ်ပါဘူး။ ခပ်ပိန်ပိန်လေးပါဆရာ။ သူ့မှာ Bronchitis လို လက္ခဏာမျိုးရှိပါတယ်ဆရာ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က TB ဆေးသောက်ထားပါတယ်။ ၆ လပါ။ Chest X ray ရိုက်တော့ lung ရဲ့ apex မှာ opaque လေးဖြစ်နေပါတယ်။ lymph nodes တွေကြီးနေပါတယ်။ Tuberculin test negative ပါ။ early morning sputum3ကြိမ်ယူပါတယ် negative ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဆေး ၆ လောက် သောက်ခဲ့ပါတယ်။ သောက်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့် ပြန်ပြောပြတာက ၄ လ မြောက် ရင်ခေါင်းတည့်တည့်က နာလာပါတယ်တဲ့ဆရာ။ ၄ လ မြောက်မှာပဲ chest x ray ထပ်ရိုက်ခိုင်းတော့ Bronchus နားမှာ consodilation ဆိုလား fibrosis ဆိုလားဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့မှာ TB လက္ခဏာမရှိပါဘူး။ ချောင်းဆိုးတာ။ ညနေခင်းဖျားတာ။ တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ TB treatment complete ဖြစ်သွားပြီး အတော်ကြာတော့ မနက်အိပ်ယာနိးရင် ပျို့ပျို့ပြီး ချောင်းဆိုးပါတယ်။ အန်ပါတယ်။ ထမင်း စားပြီးတိုင်း Body temperature က အရမ်းပူလာပါတယ်။ အလိုလိုနေရင်း ခေါင်းချွေးနဲ့ လည်ပင်း ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း ချွေးတွေ မနားတမ်းထွက်ပါတယ်။ ကန်တော့ပါရဲ့ဆရာ။ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်မှာ အမဲစက်တွေအများကြီးပါ။ ညှစ်ရင် အဆံလေးတွေထွက်ပါတယ်။ အသားရေက အမြဲခြောက်ကပ်။ သူ အမြဲ အစာစားပါတယ်။ အားမရှိသလို နံးနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးခန်းတွေလဲပြပါတယ်။ ခု နောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ chest x ray က အရင် chest x ray အတိုင်း Apex of the lungs မှာ opaque ဖြစ်တုန်းပါပဲ။ ခုထိ neck lymph nodes တွေရှိဆဲပါ။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ ကကလေးတစ်ယောက်က ချိတ်သံကောင်တွေ body မှာပြန့်သွားလို့ ဆေးမနိင်ပဲ သေသွားပါတယ်။ ခုဒီညီလေးရော အဲ့လို ဖြစ်နိင်ပါလားဆရာ။ အနာတစ်ခြား ဆေးတစ်ခြားဖြစ်နေလို့ အကြံပေးပါဦးဆရာ။ ဘယ်မှာ ပြသင့်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ သံချဆေး mebendazole ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ၆ လတစ်ခါ သောက်ထားပါတယ်။ Worm infections in lungs လို့ယူဆနိင်ပါလားဆရာ။ ခုချိန်ထိ ပျို့ပျို့ပြီး ချောင်းဆိုးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က အမြဲပူနေပါတယ်။ အရေပြားအနှံ့ ဝက်ခြံလို အဆံလေးတွေ ပေါက်ပါတယ်။ ချွေးတအားထွက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ respiratory tract ထဲက အပုပ်နံ့လိုလို၊ မစင်နံ့လိုလိုရတယ် ပြောပါတယ်။ ဘာ test တွေလုပ်ပြီး၊ ဘယ်သမားတော်နဲ့ ပြသရပါမလဲဆရာ။
တီဘီ ကိုသံသယရှိတာလဲ မမှားပါ။ ၆ လဆိုရင် ပိုးတွေသေပါမယ်။ တီဘီဖြစ်တာမှန်ရင်လဲ ပိုးသေပေမဲ့ အဆုပ်မှာ အမာရွတ်လိုကျန်နိုင်လို့ ဓါတ်မှန်မှာ အဖြူရောင်ပြနေတာ ကျန်နေနိုင်ပါတယ်။ တီဘီမဟုတ်ပဲ တခြားရောဂါကိုလဲ ဆက်စဉ်းစားရပါမယ်။ ဒီအသက်မှာ အဆုပ်ကင်ဆာကိုသံသယမထားသင့်သေးပါ။ တက်စေ့ဆိုတာက ဗက်တီးရီးယား ဝင်တာ၊ တီဘီဖြစ်တာနဲ့ ကင်ဆာကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အနံ့ဆိုးရတာက ပိုးအသေတွေနဲ့ သွေးဖြူဥအသေတွေရောနေလို့ဖြစ်ပါမယ်။ ပိုးအမျိုးအစားအလိုက် အနံ့ထွက်တတ်တယ်။
သန်ကောင်ကို သံသယထားတာလဲ မလွန်ပါ။ ဓါတ်မှန်နဲ့ မသိသာရင် တခြားစစ်ဆေးနည်းတွေ လုပ်ရပါအုံးမယ်။ ရွစိရွစိနေတာနဲ့တော့ သန်ကောင်လို့ ပြောမရသေးပါ။ ချွဲကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆုပ်ကို သန်ကောင်ဝင်ရင် ချောင်းဆိုးမယ်။ ပန်းနာမှာလို လေပြွန်ကျဉ်းတဲ့အထဲကို လေဖြတ်ရတဲ့အသံမျိုးကြားရမယ်။ လူကပိန်ပိန်လာမယ်။ စစ်ကြည့်ရင် ဝမ်းနဲ့ သလိပ်ထဲမှာ သန်ဥတွေ့နိုင်တယ်။ သွေးစစ်ရင် အီယိုဆင်နိုဖီးလ် များနေမယ်။
Strongyloides stercoralis သန်ကောင်အမျိုးအစားကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ bronchitis လေပြွန်ရောင်တာနဲ့ pneumonia နူမိုးနီးယားဖြစ်စေမယ်။ အဆုပ်တစ်ရှူးတွေကို ပျက်စီးစေမယ်။ လူကိုပါသေစေနိုင်တယ်။
သန်ချဆေးပေးမယ်။ ဆိုးတဲ့သူတွေကို Prednisolone ဆေး ရက်တိုပေးမယ်။ Oxibendazole ဆေးကို ကာကွယ်ရာမှာ သုံးတယ်။ Fenbendazole ဆေးကို ကုသရာမှာသုံးတယ်။
အဆုပ်သန်ကောင်က တိရစ္ဆာန်တွေမှာအဖြစ်များတယ်။ အမေရိကမှာ fluke worms သန်ကောင်ကနေဖြစ်တာ များလာတယ်လို့ ၂ဝဝ၉ တုံးကထုတ်ပြန်ချက်တခုရှိပါတယ်။ Crawfish ငါးအစိမ်းစားသူတွေမှာလဲလိုဖြစ်တယ်။ Shellfish ငါးအမျိုးအစားတွေက ဒီသန်ကောက်တွေရဲ့ နေအိမ်လို ဖြစ်တယ်။
လက်ပံတောင်းအရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် အရင်ရေးခဲ့တာလေးပြန်တင်ပါရစေ။ အမှန်က တတိယအကြိမ် ပြန်တင်တာပါ။ ဒုတ်ယအကြိမ်တုံးက ဒီလိုအစပျိုးခဲ့တာပါ။ စာရေးဆရာ နေဝင်းမြင့်ရေးတဲ့ ခရီးနိုင်ငံရေးစာအုပ်ထဲက ဆားလင်းကြီးထဲမှာ ကိုမှန်ပြောင်းကနေ ရွတ်ဆိုတဲ့ ဆဒ္ဒန်ပျို့ထဲက ‘စက်ဟုန်သရ၊ ဆိပ်ရည်ဝဖြင့်၊ သားများသေမင်း၊ မုဆိုးခွင်းသား’ကိုဖတ်ရပြီးတော့၊ ၁၄-၃-၂ဝ၁၃ တုံးက ကျွန်တော် ရေးခဲ့တာလေးကို ပြန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းအစီရင်ခံစာထွက်လာတာနဲ့ အသံတွေ အတော်ကြီးညံပါတယ်။ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ၆ ယောက်ကနေ ဆင်တစ်ကောင်ကို ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ပြီးသကာလ ကောက်ချက်ချကြတာမှာ ၆ မျိုးထွက်တဲ့ပုံပြင်ကိုလူတိုင်းကနားရေဝပြီး ဖြစ်ပါမယ်။ အခုအဖြစ်ကတော့ ကားလိပ်ကြားကနေ ဘွားကနဲ ဆင်ကောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ၊ စူးရှတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့သာ ကြည့်ကြတာမို့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အရေးအသားတွေ၊ အသံသြဇာပါပါနဲ့ ဝေဖန်သမှု ပြုကြတာတွေ ကြားရတာ စဉ်တိုက်ဆက်တိုက်ပါပဲ။
မျက်စိမမြင်လို့ ဆင့်နားရွက်ကိုသာ စမ်းမိသူကနေ ဆင်ဟာယပ်တောင်လိုပဲထင်တာ ‘ဒုက္ခိတအမြင်’ ဖြစ်ပြီးရိုးပါတယ်။ အမြင်တွေအကြားတွေ အာရုံတရားတွေ ကောင်းလှသူတွေရဲ့ ‘သုခိတအမြင်’ တွေမတူကြတာဘာလို့ပါလဲ။
အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာမှာ အဓိကရုဏ်းဖြိုခွင်းရာမယ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်ဟာမီးခိုးဗုံးလို့ ပါတယ်။ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကလဲရေဒီယိုမှာ ရှားရှားပါးပါးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးပြီး၊ Smoke bomb လို့ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ လုံခြုံရေးအသုံး စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအရပြောရရင်တော့ ဆရာဝန်တွေဟာဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးပြီး၊ လူနာပြောတာကို တိုက်ရိုက်ယူရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကတော့ လက်နက် အိတ်စပတ် မဟုတ်လို့ ဒီလိုချရေးမိမှာပါ “မီးအကြီးအကျယ် လောင်စေသော တရားဝင်မီးခိုးဗုံးဟုခေါ်ဆိုသည့်လက်နက်” လို့ရေးပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ချက်ချင်းဆိုသလိုအခင်းဖြစ်ရာကလူထုဆီလာခဲ့တယ်။ ရှင်းစရာတွေရှင်းမေးတာတွေ ပြန်ဖြေပါတယ်။ သူကချည်းပြောသွားတာလို့လဲ ပြန်ပြေတာ ကြားမိပါတယ်။ ကော်မရှင်ကစစ်ဆေးကြားနာပြီးဖြစ်တာမို့ ထွက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုနားလည်စေအာင် လာရှင်းပြတာပါ။ ထပ်ပြီးနားထောင်ဘို့ရာအချိန်တန်တော့ တခါထပ် နားထောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသင့်ရေးထားတဲ့ကြောညာချက်ကို ဖတ်ပြတာမဟုတ်တာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ နဝတ၊ နအဖခေတ်မှာ ဇာတ်လမ်းတွေဆင်၊ ဇယားတွေဆွဲပြီးလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမျိုးနဲ့ဆို ဆီနဲ့ရေလိုကွာခြားပါတယ်။ ဒါကအချက်လေးတခုပါ။
လူတချို့ဟာတုံ့ပြန်တာလွယ်တတ်ကြတယ်။ ကောက်ချက်ဆွဲတာမှာလဲအခုမြင်လိုက်ရတာကို ကြည့်ပြီး၊ ကြားပြီး၊ ဖတ်ပြီး၊ ချက်ချင်းကြီးကံတရားလေးပါးနဲ့ စဉ်းစား-ရေးသား-ပြောဆို-ပြုမူတတ်ကြတယ်။ အဖြစ်အပျက်တခုတိုင်းမှာထင်ပေါ်သူ၊ ထိပ်ဆုံးကလူကိုဦးတည်လေ့ရှိပါသေးတယ်။ ရခိုင်မှာ ပြဿနာတွေ ပွက်ပွက်ဆူချိန်မယ် အစိုးရကနေ ရပ်တည်ချက်တခု ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အစိုးရသဘောတားကကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီတာမို့ ချက်ချင်းကြီးဆိုသလိုသမ္မတကိုချီးမွမ်းထောပဏာ ပြုလိုက်ကြတယ်။
မကြာပါဘူးကချင်ဒေသမှာထိုးစစ်တွေဆင်၊ လေယာဉ်တွေသုံးတော့ အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရစရာမရှိအောင် အပြစ်တင်ကြပြန်ပါရော။ “အာဝါ ပရက်ဆီးဒင့်” လုပ်သူနဲ့ “အလိုမရှိ” လုပ်သူတွေကအတူတူတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါမယ်။ ဟုတ်တာလဲပါမှာမလွဲပါ။ ဖြစ်သင့်တာကစိတ်မစောဘို့၊ မလောဘို့လိုပါတယ်။ အမြန်အဆန် တုံ့ပြန်လိုက်မိတော့ ရခိုင်ဒေသကအရေးမှာကိုယ်နဲ့ဘာသာမတူသူတွေကလုပ်ကြတာပဲဆိုပြီးအဲဒီဘာသာတရားကိုပါ ပြစ်တင်မိကြရာကနေအမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်စေခဲ့တယ်။ ဘာသာမတူသူတွေကြားမလိုအပ်ပဲအမုန်းပွါးစေခဲ့တယ်။ အမှန်ကတိုင်းတပါးသားတွေ တရားမဝင် လူတွင်ကျယ်လာလုပ်တာကိုတားဆီးရေးဦးတည်ရမှာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် စူးစူးဝါးဝါးအော်လို့ကောတိုင်းတပါးသားအရေးအေးမှာတဲ့လား။
ဒေါ်စုဒီတခါ မုံရွာလာတာအရင်တခါနဲ့မတူပါ။ ဒီတခါမှာ ဆန္ဒအပြခံရတာဟာ စစ်အစိုးရလက်ထက်တုံးက လူတွေကို ဇွတ်ခေါ်ပြီး လုပ်တဲ့ ဆန့်ကျင်ပွဲကြီးတွေနောက်မှာဒါပဌမဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီမှာဒါမျိုးတွေ လာအုံးမှာပါ။ ပါတီဥက္ကဌပူပူနွေးနွေးကမသိမရှိပါ။ ရဲရဲကြီးလာပါတယ်။ ဘယ်သူကမှဖိတ်လို့၊ ခိုင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါ။ လက်ပံတောင်းအစီရင်ခံစာမထွက်ခင်ကတည်းကလည်းစဉ်းစားပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရင် မှားမယ်မထင်ပါ။ စီးပွါးရေးမှာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ဖြစ် “တွက်ချက်ပြီးသား အန္တရာယ်” ဆိုတာမျိုး၊ ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို သိသိကြီးနဲ့ ရွေးရတတ်ပါတယ်။
လူတဦးစကားပြောတာကိုအသေအချာကြည့်ပါ။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနေတာလား။ လိန်ဆင်တွေလား။ အရေးကြီးတာတခုက ပြောတာကိုလဲ “စာကြောင်းတွေကြားမှာဘာများပါသလဲသိအောင်လုပ်ပါ” လို့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး “မပြောပဲချန်ထားတာဘာရှိသလဲဆိုတာက ဒီအရေးမှာအရေးအကြီးဆုံး စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။” တွေးယူရင် မှန်တာတွေရော ကျန်တာတွေပါ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ နိုင်ငံထိပ်သီး၊ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ အရာရာတိုင်းကို ထုတ်မပြောကြပါ။ တေမိမင်းသားစကားမပြောတာအကြောင်းရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။
လပိုင်းအတွင်းမှာသာ မဲရွေးပွဲလုပ်ရင် ဒေါ်စုကိုမဲပေးမဲ့သူအရေအတွက်ဟာအစီရင်ခံစာမထွက်ခင်ကထက် နည်းမှာပါ။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာအောင် လက်ရှိအစိုးရက တမင်အကြံနဲ့ ဒေါ်စုကိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပေးလိုက်တာလို့တော့ မထင်ပါ။ အခုလိုဆူညံသံတွေ ဖြစ်နေတာအတွက်လဲလက်ရှိ “အာဏာယူပါတီ” က လက်ခမောင်းခတ်နေမယ်လဲမထင်ပါ။ သမ္မတနဲ့ ဒေါ်စု တကြိတ်တည်းတဥာဏ်တည်းလုပ်နေတာလို့လဲ မယူဆပါ။ စစ်တပ်ကလည်း ကွယ်ရာမှာ ရယ်သွမ်းသွေးနေမယ်လို့လဲ မယူဆပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အပြောင်းအလဲတခုဆီဦးတည်နေတယ်။ ဘယ်ဘက်ကမှ မနိုင်ကြလို့ ကြားနည်းကို နှစ်ဖက်လုံးက ရွေးလိုက်ကြပြီး လုပ်နည်းသစ်နဲ့ စခန်းသွားနေကြချိန်ဖြစ်တယ်။ မကြိုက်သူတွေကလဲမကြိုက်ပဲနေခွင့် အပြည့်အဝ ရှိကြပါတယ်။ လက်တွေ့ဖြစ်နေတာကတော့ အရှိတရားပါ။ အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်မှုဟာဘေးတိုက်ယှဉ်ပြီး (လက်တွဲဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမဟုတ်ပါ) ခရီးဆက်ဘို့ရာတဆင့်တက်လာစေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် ဒေါ်စုကိုရင်ထဲကထုတ်လိုက်ပြီးနေပူကြီးထဲမှာရဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြသူတွေအတွက် ထည့်မတွက်တာလား မေးနိုင်ပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှု အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ထပ်လုပ်ရအုံးမှာပါ။ တခုတော့ ထောက်ပြပါရစေ။ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဘယ်သူ့ကိုပစ်မှတ်ထားမလဲ။ ဒေါ်စုကိုလား၊ ဝမ်ပေါင်ကိုလား၊ ဦးပိုင်ကိုလား။ သုံးခုလုံးလား။ ဘယ်ဟာကိုမှ မထားပါနဲ့လို့ မတားပါ။ “ပျော့တဲ့ပစ်မှတ်” ရွေးပြီးလုပ်ကြတာထုံးစံပါ။ ကျွန်တော့်သဘောက နောက်နှစ်ခုကို ဦးတည်စေချပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့့
“ဒေါ်ပေါင်” ကိုဒီနေရာမှာမပြောသေးပါ။ “ဦးပိုင်” ကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ “၂ဝဝ၆-ဝ၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဦးပိုင်လီမိတက်ဟာ အမြတ်ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅ သောင်းလောက် ရှာနိုင်ခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်ကစပြီး သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံကနေအတိုးရောအရင်းပါ ဒေါ်လာငွေ ၅ ဘီလီယံနီးပါးရခဲ့တယ်။” ဒါကနမူနာအတိုချုပ် အချက်ကလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ရေဒီယိုဆွေးနွေးခန်းတခုမှာ အစိုးရဘတ်ဂျက်ထဲက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ်အကြောင်း ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အမတ်မင်းများကနေ (ဘယ်ပါတီကလဲမေးစရာမလိုပါ) တပ်မတော်သားသားသမီးတွေ ကျောင်းပို့ရင် အရပ်သားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလိုမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဘာညာ၊ ငွေဘဏ္ဍာပိုပေးသင့်ပါတယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောချင်လာမိတယ်။ အမတ်တွေပြောကြတာ “စိတ်ပျက်စရာအလွန်ကောင်းလွန်းပါတယ်။”
မြန်မာ့စီပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်မှာရည်ရွယ်ချက် (၄) ချက်ရှိပါတယ်။ တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတုိ့၏ မှီခိုသူ ဇနီးသားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုသူဇနီးသားသမီးများ သက်သာ ချောင်ချိရေး၊ ပြည်သူလူထုသက်သာချောင်ချိရေးအားအထောက်အကူဖြစ်စေရေး၊ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးလို့ ပါထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်သားမိသားစုတွေအတွက် အစိုးရဘတ်ဂျက်ထဲက ယူနေစရာမလိုလောက်အောင် ပေါကြွယ်လွန်းနေတဲ့ ဦးပိုင်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ သမာသမတ်ရှိ-မရှိသိချင်သင့်ကြပါတယ်။ တပ်မတော်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
မျက်မမြင်ဥပမာ ထပ်ပေးပါရစေ။ သုဝဏ္ဏသာမဇာတ်တော်ထဲမှာ ဘုရားအလောင်းဟာ မြားမှန်တဲ့အခါ မြားပြစ်သူကိုအရင် မစူးစမ်းပါ။ မျက်မမြင်ဒုက္ခိတမိဘနှစ်ပါးအတွက် သူပူပင်လွန်းလို့ ငိုကြွေးပါတယ်။ ဒီဇာတ်တော်မှာ မြားပြစ်သူက ဘုရင်မင်းတပါး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာဒီသဘောပါပဲ။ ဒေါ်စုရဲ့စဉ်းစားချက်ဟာလဲ နှလုံးသားရောဦးနှောက်ပါ အသုံးချလိုက်တာလို့ အခိုင်အမာယုံကြည်ပါကြောင့်း့
သမင်ပြစ်တဲ့မြား သမင်ကိုသာ မှန်ပါစေဗျား။ နဂါးအတွက် အားတွေ မဖြုန်းကြပါနဲ့။
• ‘ပိတောက်ပြီးတော့ ခွေးတောက်’ အောက်မှာ ညီတော်မောင်က မှတ်ချက်ရေးတယ်။ ‘တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီနေ့ ခွေးတောက်ရွက်ချက်စားရတယ်’။
• နှစ်တွေက ၂ဝ ကျော်ပြီ၊ နိုင်ငံတွေလဲ အနည်းမနော သွားဘူးတယ်။ ဘယ်မှာမှ ရှာမရသေးတာ စရစ်ဖူးရယ်၊ ဆူးပုတ်ရွက်ရယ်။
• ဆူးပုတ်ကလေးလို့ပြောတာကို ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မတွေ့သေးဘူး။ ဆူးပုတ်ကြီးကိုတော့ ထိုင်းနဲ့ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်မှာရတယ်။
• မုံရွာက စဖြူဥငါးပိကို နှမဆီကိုလှမ်းမှာတာ။ မိုးရာသီမှရတယ်ဆိုလို့ မိုးရွာအောင်စောင့်အုံးလိုက်မယ်။
• စားချင်တာတွေ အကုန်လောက်ရတဲ့ မုံရွာသာစည်လမ်းဈေးလေးကို အမှတ်ရတယ်။ တလောက ဈေးဓါတ်ပုံတွေ ရတယ်။
• ‘အမေ (သို့) တစ်တီတူး တကောင်ကပေးခဲ့သော သင်ခန်းစာ’ ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးမှာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ကိုမြင့်အေးက ရေးတယ်။
• ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလဲ မုံရွာ၊ ရတနာပုံရက်ကွက်၊ ကျွဲလူးအိုင်ကနေ ရွံ့တွေခူးပြီး၊ လောက်စာလုံး လုံးတယ်။ ဘတ်ဂွတစင်းနဲ့ မြို့တွင်း (ဆူးလေကုန်းရပ်ကွက်) လှည်တယ်။ တကောင်တမြီးမှ မရဘူးဘူး။
• မန္တလေး၊ ဆေးကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတသိုက် ငါးမျှားထွက်တော့ အနည်းဆုံးနဲ့ အသေးဆုံးငါးတွေဘဲ ရဘူးတယ်။
• ဖေါင်ကြီးသင်တန်း (ဇေယျ ၁၉) မှာ ၃ဝ၃ ရိုင်ဖယ်ကျည် အတောင့် ၂ဝ ပြစ်ရတာ စက်ဝိုင်းခပ်ကြီးကြီးထဲသာ မှန်ခဲ့တယ်။
• ဒါပေမဲ့ ဒေလီမှာ Toy gun ကလေးကစား သေနတ်တလက် ဝယ်လာတာကို ကိုဗလ (သူလဲ နိုင်ငံရေးမှာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဘဲ) ရှေ့မှာ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး၊ နံရံပေါ်က ပိန်ညောင်ကို ပြစ်ပြတာ ဒက်ဒိမှန်သွားတော့ ကိုဗလခင်မြာ ဆရာ့ကို ‘ဘရာဗို’ မလုပ်ဘဲနေလို့မရ ဖြစ်သွားတယ်။
ဗိုက်အငှားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်း ထိုင်းမှာ တားမြစ်လိုက်ပြီ
• သားသမီးမရနိုင်သေးတဲ့ စုံတွဲတွေကနေ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဗိုက်အငှားနဲ့ကလေးမွေးစေတဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တွင်ကျယ်ပါတယ်။ လတ်တလော အမှုအခင်းတွေဖြစ်လာရာကနေ ဥပဒေနဲ့ တားပြစ်လိုက်ပါပြီ။
• သြစတေးလျ ဇနီးမောင်နှံတို့ကနေ ထိုင်းဗိုက်ငှားမိခင်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေပြီး မွေးလာတဲ့ ကလေးမှာ မွေးရာပါ (ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်း) ရောဂါနဲ့မွေးလာလို့စွန်ပြစ်ခဲ့တယ်။
• အလားတူ ဂျပန်ယောက်ျားတယောက်က ဗိုက်အငှားကလေးပေါင်း ၉ ယောက်ရှိတဲ့သတင်း ထွက်လာတော့ ထိုင်းလူထုက စိတ်ဆိုးကြတယ်။
• ထိုင်းမှာ အဲဒီလုပ်ငန်းကို ကုန်သွယ်ကြေညာမလုပ်ရလို့ ၁၉၉၇ ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
• ထိုင်းဥပဒေအရ ဗိုက်ငှားအမျိုးသမီးဟာ မွေးလာတဲ့ကလေးနဲ့ သွေးသားအရ အမျိုးတော်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
• အခု စစ်အစိုးရလက်ထက် ထိုင်းလွှတ်တော်ကနေ ထောက်ခံမဲ ၁၇၇ နဲ့ တားမြစ်ဥပဒေ အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေချိုးဖေါက်သူ ထောင် ၁ဝ နှစ်အထိကျနိုင်တယ်။
• အလုပ်သွားချိန်ရောက်ပေမဲ့ ကဗျာဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်နေသတဲ့၊
• ဖတ်မရလဲ စပ်ပါလားလို့ပြောမိတယ်၊
• စပ်ဖို့နေနေသာသာ အလုပ်တွေလုပ်ရတာက တရစပ်တဲ့။
• အမှန်ကတော့ဗျာ့့ ကဗျာကသာ လူတွေကို ဖတ်နေ စပ်နေတာပါ၊
• ပြောလိုက်သေး၊ အေ့း့၊
• လူတွေက စိတ်ကူးတွေနဲ့ တွန့်ပြီး ကွန့်ပြီး စွန့်ပြီးရေးတာကို ကဗျာတဲ့၊
• ငါကတော့ မှန်ကြည့်ရေးတာ၊ ဖွင့်ကြည့်နေစရာမလိုတဲ့ဟာ၊
• ကဗျာလို့မခေါ်လဲနေပါတဲ့။ ။
• သမတကနေပြောတဲ့ (အင်စတီကျူးရှင်း) ဆိုတာပါလဲ။ အသင်းအပင်းကိုဆိုလိုတယ်။ အုပ်စုဆိုတာလဲ ဖြစ်ပါမယ်။
• အဲတာတွေထဲမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတာနဲ့ မထားတာ၊ အသိအမှတ်ပြုထားတာနဲ့ မထားတာဆိုပြီးရှိတယ်။ ဥပမာ မြေပေါ်နဲ့မြေအောက်၊ တောတွင်း-ပြည်ပနဲ့ မြို့တွင်း-မြေပေါ်။ အတိအကျပြောရရင် အစိုးရနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တာ။
• ၂ဝဝ၈ မှာအတည်ပြုတယ်လို့ လုပ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေးတဲ့သဘော မဟုတ်ဘူးလို့ သမတအဖွဲ့ကနေ ဝန်ခံလိုက်ပြီ။
• ဒါဖြင့်ရင် အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ဘယ် (အင်စတီကျူးရှင်း) တွေ၊ အုပ်စုတွေ၊ အသင်းအပင်းတွေကနေ ရေးခဲ့သလဲ။
• ၁၉၉၃ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို (နဝတ) ကနေခေါ်တယ်။ တက်ရောက်ဘို့ ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ အစုအဖွဲ့ (၇) ခုရှိခဲ့တယ်။ တရားဝင်ဆိုလို့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ နိုင်ငံရေးပါတီတွေသာရှိပြီး၊ ကျန်တာတွေက စစ်အစိုးရကနေ ရွေးကောက်ထားတဲ့ တရားဝင်မတည်ရှိတဲ့ အစုဆိုတာတွေသာ ဖြစ်တယ်။
• တနည်းအားဖြင့် (အင်စတီကျူးရှင်း) သဘောအရဆိုရင် စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အုပ်စုမဟုတ်တာ ၂ စုတည်းသာ ဖြစ်တယ်။
• အမျိုးသားညီလာခံကို NLD အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေက (၁၄-၅-၂ဝဝ၄) ကစပြီး သပိတ်မှောက် ထွက်ခွါလိုက်တော့ တစ်စုတည်းကနေသာ အပြီးသတ်ရေးပြီး အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် (အင်စတီကျူးရှင်း) တခုတည်းကနေသာ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲ၊ အတည်ပြုထားတာဖြစ်တယ်။
• အခုတခါ နောက်ထပ် (အင်စတီကျူးရှင်း) လို့ အစိုးရအဖွဲ့ကနေ သတ်မှတ်တာတွေ ရှိလာပြန်တယ်။ (၅) ခုတဲ့။ လက်ရှိအစိုးရဟာ ဒီနေရာမှာ စစ်အစိုးရလုပ်တာနဲ့ ထပ်တူဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။
• သူတို့အလိုကျရေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဘို့ရာ လွှတ်တော်ကနေသာလုပ်ရမယ်လို့ ပါထားတယ်။ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ (၆) ဦးက သဘောဝမကျဘူးပြောပြန်တယ်။ (လွှတ်တော်ပြောတာကို သဘောတူလှတယ်တော့ မဟုတ်ပါ။)
• အဲတော့ ကနေ့မြန်မာပြည်မှာ (အင်စတီကျူးရှင်း) အုပ်စု (၂) ခုထဲသာရှိတယ်။ စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အုပ်စုမဟုတ်တာ။ ဒီကြားထဲမှာ အလိုတော်ရိတွေတော့ရှိတာပေါ့။
• (အင်စတီကျူးရှင်း) နှစ်ခုတိုက်ပွဲ ဆက်ဆင်နွှဲ။
• သမတက လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေခံတာ လက်မခံပါတဲ့။
• သမတအပြောက စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဖြစ်တယ်။
• အဲဒီစာအုပ်ကြီးကို အရေးခိုင်းခဲ့တဲ့ စစ်တပ်က စာအုပ်ကြီးအဓွန့်ရှည်ရေးသာ လုပ်မယ်။
• လူတွေက စာအုပ်ကြီးကို ပြင်ချင်နေကြတယ်။
• ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာအုပ်ကြီးကိုရေးခဲ့တာက လူ (ပုဂ္ဂိုလ်) တွေမဟုတ်လို့။
Shampoo and Conditioner Alone Won't Give You Healthy Hair ဘယ်လောက် ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ (ကွန်ဒီရှင်နာ) တွေ သုံးပေမဲ့လဲ ဆံပင်အတွက် မပြည့်စုံသေးပါ။
“Lather, rinse, repeat အမြှုတ်ထအောင်လုပ်ပါ၊ လျှော်ပြစ်ပါ၊ ထပ်ပြီးလုပ်ပါ” ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ ခေါင်းလျှော်နည်း အကြံပြုချက် ဖြစ်ပေမဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ (ကွန်ဒီရှင်နာ) တွေချည်းနဲ့တော့ ဆံပင် ကျန်းမာရေးအတွက် မပြည့်စုံသေးပါ။ ဆံပင်တွေဟာ တလမှာ ၁/၄ လက္မကနေ ၁/၂ လက္မအထိ ရှည်လာရမယ်။ အသားအရေ၊ ကေသာ နဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်းတွေ ကောင်းမွန် ကျန်းမာနေအောင် အာဟာရ ပြည့်ဝပြည့်ဝ စားသုံးတတ်ကြဘို့ လိုသေးတယ်။
1: Salmon (ဆယ်လ်မွန်) ငါး
2: Dark Green Vegetables စိမ်းစိုလတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ
3: Beans ပဲသီး
4: Nuts အစေ့အဆံတွေ
5: Poultry အသားတွေ
6: Eggs ဥ
7: Whole Grains အနှံတွေ
8: Oysters မုတ်ကောင်
ပင်လယ်စာတွေထဲက မုတ်ကောင်က ကျန်းမာရေးအတွက် စားစရာထဲမှာ နာမည်ကြီးတယ်။ လိင်စိတ်အာပေးတာသာမက ဆံပင်ကောင်းစေဘို့လဲ ပါသေးတယ်။ Antioxidant ဖြစ်တယ်လဲ ဆိုပါတယ်။
9: Low-Fat Dairy Products အဆီနည်း နို့ထွက်အစာတွေ
Skim milk အဆီလွတ်နွားနို့၊ အဲဒါမျိုးကနေလုပ်တဲ့ (ရောဂတ်) တွေမှာ (ကယ်လ်စီယမ်) ပါတယ်။ အရိုးအတွက်သာမက ဆံပင်အတွက်လဲကောင်းတယ်။ Whey and casein ပရိုတင်းတွေလဲ ပါသေးတယ်။
10: Carrots မုံလာဥနီ
Beware of Dietary Supplements သတိထားစရာတွေ
• ဗီတာမင် (အေ) များတာ မကောင်းပါ။
• လူပိန်ချင်လွန်းလို့ Crash diets အစားကို နည်းသင့်တာထက် အရမ်းနည်းစားတာလဲ လူကျန်းမာရေး၊ ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါ။
ဆရာ့စာထဲမှာ ဆံပင်ကြမ်းတာကို ဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာ မပါလို့ပါဆရာ။ ကျွန်တော့်ဆံပင်က ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ အလှကုန်စာရေးတွေကတော့ တံဆိပ်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနေပေမယ့် ထူးခြားမှု မရှိလှလို့ပါဆရာ။
၁။ နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်ရင် ဆံပင်ပိုကြမ်းတယ်။ ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါ။
၂။ ရေနွေး ၁ ခွက် + Calgon, 20-mule Borax ဇွန်းသေး ၂ ဇွန်း ရောပါ။ ခေါင်းကိုလိမ်းပါ။
၃။ ပုံမှန် Regular conditioner ကွန်ဒီရှင်နာဖြစ်ဖြစ် Salon-quality ကွန်ဒီရှင်နာဆိုင်သုံး ဖြစ်ဖြစ်သုံးပါ။
၄။ Anti-frizz hair oil ဆီလိမ်းပါ။
၅။ Blow dryers Flat irons တွေ မသုံးပါနဲ့။
၆။ Hairspray သုံးရင် မများစေနဲ့။
၇။ Dying ဆေးဆိုတာနဲ့ Highlighting အရောင်ရင့်သန်စေတာ မလုပ်ပါနဲ့။
၈။ Filter တခုဝယ်သုံးပါ။
၉။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်း၊ ကွန်ဒီရှင်နာသုံးပြီးတိုင်း၊ ခေါင်းဖီးပြီးတိုင်း၊ Leave-in conditioner ဖြစ်ဖြစ် Dry shampoo ဖြစ်ဖြစ်သုံးပါ။
၁ဝ။ ကြက်ဥသုံးကြည့်ပါ။ တနာရီထားပါ။ နောက် ပြောင်စင်အောင်ဆေးလိုက်ပါ။ ညမအိပ်ခင်လိမ်းထားနိုင်တယ်။ မနက်မှဆေးပါ။
၁၁။ ဆီပူနဲ့ တပါတ်တခါလိမ်းပါ။ သဘာဝဆီ၊ Rosemary ဖြစ်ဖြစ် Lavender ဖြစ်ဖြစ် ဆီသုံးနိုင်တယ်။
၁၂။ Conditioner သုံးရင် ပြောင်စင်အောင်မဆေးဘဲထားပါ။ စိုနေတုံးမှာ ဆံပင်မဖီးပါနဲ့။
• အခုတပါတ်အတွင်းတင်ထားတဲ့ ဆေးပညာစာတွေထဲက စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ကလေးတွေဝမ်းချုပ်ရင်စာ ၂ ပုဒ်ကို အဖတ်များပြီး၊ ရှယ်ကြတာလဲများတယ်။
• လူကြီးတွေက စိတ်ဓါတ်ကျပြီး၊ ကလေးတွက ဝမ်းနည်းနေကြတယ်။
• နေပြည်တော်ကလူကြီးဆိုသူတွေကတော့ စိတ်ဓါတ်တွေတက်ပြီး ရန်ဖြစ်နေကြတယ်။
• ဆရာဝန်လဲ နေပြည်တော်က မဟုတ်သူတွေအတွက် ဆေးနည်းသာ ပေးနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းပါတယ်။
သမတ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ = “ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေး” သဘောထားဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်အရချဉ်းကပ်တာသာဖြစ်တယ်။ အစိုးရက ‘အင်စတီကျူးရှင်း’ ကို အခြေခံတယ်။ ၁၄ ဦးဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်၊ အဖွဲ့ကြီးငါးဖွဲ့တွေ့ဆုံတာဖြစ်။
သဘောထားအမြင်များ = အမျိုးမျိုးပြောဆိုကြ။
• အရေးပါသူတွေ ပြောစရာရှိတာကို ပြောသာပြောကြပါ။ စကားမပြောပဲ စကားတွေ များမနေကြပါနဲ့။
• သမတကလုပ်ခဲ့တာက လူများပွဲမစည်။ လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်တာက လူတွေပဲခေါ်၊့့ ကို ခေါ်တာမဟုတ်။
• လွှတ်တော်ရဲ့ (၆) ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံရေးဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် အဓိကဖြစ်။
• သမတရဲ့ အဖွဲ့ကြီး (၅) ဖွဲ့အစီအစဉ်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟာ ၃ ပုံ ၁ ပုံသာအရေးပါ။
• ကာချုပ်ကလဲ လုပ်ပါအုံးမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်ဆင်ရေးက အဓိက။
• ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်နိုင်ရင့့်
- အဲဒီ (လွှတ်တော်) လူတွေပြင်၊
- အဲဒီ (အစိုးရ) အင်စတီကျူးရှင်းတွေပြင်၊
- အဲဒီ (ကာချုပ်) တပ်မတော်ပြင်။
• အဲဒီဟာတွေမပြင်နိုင်ရင် လူထုကပြင်။
ကျားလိင်အင်္ဂါကို ဆေးထိုးကြပြီး ဒုက္ခရောက်ကြလို့ မေးလာသူတွေမနည်းပါ။ အများဖတ်အောင်တင်သင့် မတင်သင့် စဉ်းစားနေခဲ့တာ နှစ်တွေကြာပါပြီ။ အပြစ်တင်ချင်သူတွေက ကျွန်တော့်ကိုသာတင်ကြပြီး၊ အကျိုးဖြစ်နိုင်သူတွေကများမှာမို့ အရင်ရေးထားတာကို မွမ်းမံပြီးတင်ပါရစေ။
လက်လှမ်းမီသလောက် မလုပ်ကြအောင် သတိပေးကြစေချင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကျားအင်္ဂါကို ဆေးထိုးပြီး လူစဉ်မမှီ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အရပ်နည်းတွေ၊ ‘အွန်လိုင်း’ ကြော်ညာတွေကို မယုံကြပါနဲ့။ လူဖြစ်ရှုံးသွားကြသူတွေ မနည်းတော့ပါ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလိုယောက်ျားလိင်အင်္ဂါကို ဆေးထိုးလို့ ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတဲ့သုတေသန သိပ်မတွေ့သေးပါ။ အဲလုပ်ကြတာ မြန်မာတွေမှာသာ များသလားမပြောတတ်ပါ။
(၁) ဘယ်သူမှမပြောပဲ မိမိဘာသာ လမ်းဘေးကဆိုင်တွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးထိုးအပ်သွားဝယ်ပြီး၊ လမ်းဘေးဆိုင်က ငနဲတွေထိုးပေးတယ်ဆိုလို့ သွားထိုးလိုက်မိတယ်။ ကြားမိတာတော့ အဲဒီဆေးကို နည်းနည်းချင်းထိုးရတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုင်ကငနဲက ၂ ကြိမ်တောင်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆေးထိုးပြီးရင် လိမ့်ချေပေးရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုမချေပေးရင် ဆေးတွေဟာ တစ်နေရာထဲကို ခဲသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ လှိမ့်ပြီး ချေနေပါတယ်။ ချေပေးတဲ့အခါ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးထိုးလည်း များသွားပုံရတယ်။ ဆေးတွေက တစ်ဖြည်းဖြည်းများသလိုပဲ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးထက် ပိုကြီးလာပါတယ်။ ဆေးတွေက တပြင်လုံးအပြင် အရှေ့က အရည်ပြားထဲအထိဝင်လာပြီး ထိပ်ကို ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး တဖြည်းဖြည်း ဆီးပေါက်တဲ့ အပေါက်ကို တော်တော်နဲ့ ဖွင့်မရတော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကြောက်ပြီး ဆရာဝန်ဆီသွားပြ ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ခွဲဖို့ ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ခဲခဲလာတတ်ပါတယ်။ ဆေးတွေထုတ်တဲ့ရက်က ဆေးထိုးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာဝန်က ထုံဆေးပေးပြီး ဆေးတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ တစ်ချို့တွေ ကျန်လိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ ခွဲစိတ်နေတုန်း ကျွန်တော့ ထုံဆေးက ပြေချင်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာဝန်က အမြန်အမြန် ချုပ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ပုံထဲကအတိုင်းကို ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ အခု အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်း အိမ်ကမသိအောင် ဆေးရုံမှာမနေပဲ ခွဲပြီးပြီးချင်း အိမ်ပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ညှော်တော့ မိကောင်းမိခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမက မခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်းဖြစ်ဖြစ် မဆက်ဆံပဲ ထားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် တစ်ချက်တစ်ချက် ဆေးခဲနေတဲ့ နေရာတွေက ကိုက်သလိုလို နာသလိုလိုလေး ခံစားမှု အသေးလေးတွေ ခံစားလာမိပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုက်သလိုလိုဖြစ်လာတာက ဒဏ်ရာကျက်ပြီး ၁ နှစ်ကြာပြီးမှ ခံစားလာရတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ အဲဒါ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သလား။ နောက်ပြီး ဆေးတွေက ဆီးဖုံးအထိကော ကပ်ပယ်အိတ် (ခေါ်) ဝှေးစေ့ အိတ်ထဲမှာပါ ပြန့်ပြီးခဲနေပါတယ်။ Picture (C) မှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း ဆေးတွေရောက်နေတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးကော ရနိုင်ပါ့မလားလို့လည်း သိချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအထဲက ဆေးခဲတွေကို ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီး ဖယ်ထုတ်လို့ကော ရနိုင်ပါ့မလား။ နောက်ပြီး Picture (B) မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပိုထွက်နေတဲ့နေရာက ကျွန်တော့်အတွက်ကော ဇနီးသည်အတွက်ပါ တအားအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ အဲဒီနေရာကို ‘ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ’ လုပ်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား။
(၂) ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က အင်္ဂါကြီးအောင် ဆေးထိုးထားပါတယ်။ ဆေးထိုးပြီးစကတော့ မကြာခဏဆိုသလို ဖောင်းလာလိုက် ပြန်ကျသွားလိုက် တခါတလေ အရမ်းကြီး နာကျင်နေတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်းတော့ အဲ့လိုတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဖျားပိုင်းမှာပဲ ဆေးထိုးထားတဲ့ အရည်တွေ စုနေတယ်နဲ့တူတယ် အဖျားပိုင်းမှာ ကြီးနေတယ်။ ထပ်ဖျားကို အောက်ဆွဲချလို့ မရဘူး။ ဆက်ဆံတာတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆီးပေါက်ရင် ဆီးကအကုန်မထွက်ပဲနဲ့ နည်းနည်းကျန်နေတယ်။ သုတ်လွှတ်ရင်လဲ ပန်းမထွက်ဘူး။ နည်းနည်းချင်း ကျတယ်။ ဒါကို ဖြတ်လိုက်ရမလား။ ဖြတ်ရင် အရင်လိုပြန်သေးသွားမလား။ ဖြတ်လည်းဖြတ်ချင်တယ်၊
(၃) ကျွန်တော် ဆေးထိုးတာက တကြိမ်ထဲပါ။ ဘာဆေးလဲတော့ မမှတ်မိဘူး။ ထိုးတာက ယိုးဒယား (မယ်ဆိုင်) မှာပါ။ ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတာက အရေပြားကိုပါ။ အရေပြားလှန်လို့မရရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပါ။ အရေပြား ဖြတ်ပြီး ဆေးတွေ ခြစ်ထုတ်လိုက်ရင် အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သေးသွားမှာပေါ့။ အကောင်းဆုံးကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(၄) ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီကို တချိန်တုန်းက ရေးဖူးပါတယ်။ လိင်တန်ကို ဆေးထိုးထားတဲ့အကြောင်းပါ။ အခုအဲ့ဒါကို ပြန်ပြီးခွဲပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆီးသွားတိုင်းမှာ ဆီးကျန်နေတာရယ်၊ ဆက်ဆံပြီးတိုင်း သုက်ရည်အကုန် အပြင်ကိုမရောက်တာရယ်၊ ထိပ်ဖွင့်လို့မရတာရယ်တွေကြောင့်ပါ။ သိချင်တာက ခွဲစိတ်ရင် အချိန် ဘယ်လောက်ကြာအောင် ဆေးရုံမှာနေရမှာလဲ၊ ခွဲစိတ်ပြီးရင် ဘာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမှာလဲ၊ (့) မှာ သွားပြီးလုပ်မှာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ကော များနိုင်လား၊ အရည်ပြားကို မဖြတ်ထုတ်ပဲနဲ့ ပြန်ပြီးချုပ်လို့ရနိုင်လား၊
(၅) အင်္ဂါကြီးအောင် ကျားအင်္ဂါထဲကို ‘ဆီလီကွန်’ တို့ ပန်းပေါင်းဆီတို့အစား နောက်ပိုင်း ပင်နယ်စလင်ထိုးဆေးအဆီကို ထိုးထည့်ကြတာ သိပ်များလာပါတယ်။ (၃) ခါထိုးရပါတယ်။ ပင်နင်စလင်အဆီက ခဲနေရင် မီးဝန်းလိုက်ပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ခါထိုးပြီး အသားနုလေးတစ်လွာ တက်လာအောင်စောင့်ပြီးမှ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ထိုးရပါတယ်။ တတိယအကြိမ် ထိုးပြီးရင် ဆေးအောင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပင်နင်စလင် ဆေးက ကျားအဂ်ါအထဲသို့ ရောက်လျင် ပန်းပေါင်းလိုမဟုတ်ဘဲ့ အသားဆဲလ်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီး သူကအထဲမှာ ဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ကျားအင်္ဂါကြီးချင်လို့ ‘ပင်နင်စလင်’ အဆီကို တော်တော်များများ ထိုးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။ ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတာ သေချာလားဆရာ သိချင်ပါတယ်။
(၆) ကျွန်တော့်အသက် ၂၅ နှစ်ပါ။့့ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာနေပါတယ်။ နားနဲ့မနာ ဖုဝါးနဲ့နာပေးပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိင်တံကို 1.1.2014 နေ့က ထိုင်းအုန်းဆီထိုးခဲ့မိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ဗျာ အုန်းဆီက အသားကို ကြိတ်ထားတဲ့ အဆီမဟုတ်ပဲ အခွံကိုကြိတ်ထားတဲ့အဆီ ဖြစ်နေတယ်။ ဆယ်ရက်လောက်ကြာတော့ ရောင်လာတယ်။ 18.1.2014 နေ့က ဆေးရုံမှာပြတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ မေးခိုင်ပိုးစားတယ်ဆိုပြီး အရေခွံတွေ လှန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဖျားမှာတော့ လက်တစ်လုံးလောက်ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါ အရေခွံပြန်ဖြစ်နိုင်လား။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပါဦးဆရာ။
(၇) ကျွန်တော့်အင်္ဂါသေးလို့ဆိုပြီးဆေးထိုးမိပါတယ်ဆရာ ခုအဲ့ဒါပြန်မပွင့်တော့လို့ပါဆရာ။
တရားဝင် လိင်အင်္ဂါဆေးထိုးနည်းဆိုတာရှိပါတယ်။ မေးလာသူတွေလို ကျားလိင်အင်္ဂါ တမင်တကာကြီးချင်လို့ထိုးရတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ (ED) ခေါ်တဲ့ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်နေတဲ့ ယောက်ျားတွေကို လိင်အင်္ဂါမှာ ဆေးထိုးကုသဘို့ FDA ကနေ ပဌမဆုံး ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးကနေ Papaverine ဆေးကို အမှတ်မထင် စတွေ့တာဖြစ်တယ်။ ကြောင်တွေကို Phentolamine (Regitine) ဆေး သွေးကြောထဲထိုးပေးပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၂ မှာ ပြင်သစ်ဆရာဝန် Dr. Virag ကနေ Papaverine ဆေးကို တွေ့လာခဲ့တယ်။ ၁၉၈၃ မှာ လန်ဒန်က ပါမောက္ခ Dr. Brindley ကနေ ပန်းသေနေသူ ၁၁ ဦးကို ဒီဆေးထိုးပေးတော့ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ကြတာ တွေ့လာခဲ့တယ်။ Papaverine ဆေးကို Alzheimer’s disease ရောဂါနဲ့ Multiple Sclerosis ရောဂါတွေအတွက်လဲ သုံးတယ်။ Papaverine နဲ့ Phentolamine ကို ၁၉၈၃ ကတည်းက သုံးခဲ့ပြီး၊ Prostaglandin E1 ကို သုံးတာ မကြာသေးဘူး။ စမ်းသပ်မှုတွေအရ ၈ဝ% မှာ သိသိသာသာ ကောင်းစေတယ်။ တဦးချင်းအတွက် ဆေးဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာ ချင့်ချိန်နိုင်တယ်။ တခြားရောဂါတွေ ရှိနေသူတွေကိုလဲ အတော်များများ ထိုးပေးလို့ရတယ်။ လိင်တံကို ဆေးထိုးပေးလိုက်ရင် အထဲက သွေးကြောတွေကို ကျယ်လာစေမယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ၃၇% ကနေပြောလာတာတွေဟာ ဆိုးဝါးတာတွေ မပါဘူး။ နာတာတို့ ဆေးထိုးအပ်ရာတော့ ရှိမယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ ရှိနိုင်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး Priapism ဆိုတဲ့ လိင်တံတောင့်တင်းနေတာ ၄-၈ နာရီ ကြာလို့တောင်မှ ပြန်မကျတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ Prostaglandin E1 ကတော့ အဲလို မဖြစ်ဘူး။ ကုလို့ရပါတယ်။
နှလုံးရောဂါအတွက် ဆရာဝန်တွေက Papaverine 120 mg ကို ၃ နာရီတခါ သွေးကြောထဲ ထိုးပေးတယ်။ လိင်တံကို ဆေးထိုးတာကတော့ 30 mg ကို တပါတ် ၂ ခါသာ ထိုးတယ်။ Phentolamine ဆေးကို များများပေးရင်တော့ သွေးဖိအား BP ကျစေနိုင်တယ်။ နှလုံးခုန်မမှန်တာ၊ ဝမ်းပျက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးထိုးတာ မနာအောင် 30 gauge ultra-fine needle အပ်သေးသေးလေး သုံးသင့်တယ်။ Papaverine နဲ့ Phentolamine ဆေးက မနာဘူး။ Prostaglandin E1 ကတော့ နဲနဲ ထူပူနာတာ ၁၅ မိနစ် လောက် ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဆေးထိုးပြီးနောက် ၅-၁၅ မိနစ်မှာ အစွမ်း ပြတယ်။ Prostaglandin E1 ကပိုမြန်မယ်။ လိင်ဆက်ဆံဘို့ ပဌမပိုင်း စပြီးနောက် သတ္တိပြမယ်။ ဆေးအစွမ်းက မိနစ် ၃ဝ ကနေ တနာရီ၊ ဒါမှမဟုတ် Orgasm ရတဲ့အထိ ကြာနေမယ်။ တလကို ၁ဝ-၁၂ ခါသာ ထိုးစေတယ်။ Papaverine နဲ့ Phentolamine ဆေးကို ဖျော်ထားပြီးနောက် ၆ဝ ရက် ထားလို့ရတယ်။ လူနာကိုယ်တိုင်က ဆေးထိုးနည်းကို သင်ယူပြီး ဖါသာထိုးနိုင်တယ်။ (အသေးစိတ် ထည့်မရေးတော့ပါ။)
Penicillin in oil ပနယ်စလင်အဆီထိုးဆေး
ပနယ်စလင်အဆီ ထိုးဆေးထဲမှာ Penicillin G procaine 100,000 units နဲ့ ပဲဆီ၊ ဒါမှမဟုတ် နှမ်းဆီ၊ ဒါမှမဟုတ် ပဲပုပ်ဆီတွေ ရောထားတယ်။ ဒီထိုးဆေးကိုတော့ သုံးနိုင်တာ နေရာတကာလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းတာ၊ နှလုံးပိုးဝင်လို့ရောင်တာ၊ ဂနိုးရီးယား၊ ဦးနှောက် မြှေးရောင်၊ အဆုပ်ပြည်တည်နာနဲ့ အန်ဖတ်ဝင်လို့ ဖြစ်တဲ့ နူမိုးနီးယား၊ လူအုပ်ကနေရလာတဲ့ နူမိုးနီးယား၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ကလေးတွေ သွေးထဲပိုးဝင်တာ၊ ပိုးဝင်လို့ အဆစ်နာရောဂါ၊ သွေးမလျှောက်ပဲ ပုတ်ဆွေးတဲ့အနာ နဲ့ ဆုံဆို့နာတွေအတွက် သုံးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Benzathine benzylpenicillin ခေါ်တဲ့ တာရှည်ခံ ပနယ်စလင်ထိုးဆေးကိုသာ သုံးပါတော့တယ်။ ‘ရူမက်တစ်’ အဖျား (လေးဘက်နာ) ကို ကာကွယ်ဘို့နဲ့ ‘ဆစ်ဖလစ်’ စောဖြစ်တာနဲ့ နောက်ကျဖြစ်တာတွေအတွက်သုံးတယ်။
ပနယ်စလင်အဆီကို တင်ပါးနဲ့ လက်မောင်းအိုးမှာထိုးရတယ်။ ထိုးရင်နာတယ်။ ဆေးထိုးလိုက်ရင် ဆေးထိုးရာနေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာကို ပင်နယ်စလင်အဆီထိုးတာကို အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးမှု လုပ်တဲ့အခါ ဒီလိုဟာတွေ တွေ့ရတယ်လို့ သုတေသန စာတမ်းတခုက ရေးသားထားတယ်။
ဆေးဝင်ရာကြွက်သားတွေ ဖေါင်းရောင်နေတယ်။ အထဲမှာ အဆီခဲလေးတွေတွေ့ရတယ်။ အဆီခဲဟာ သေသေးလေးတွေကနေ ၂ မီလီမီတာအထိ ကြီးတယ်။ အဆီခဲကြောင့် ဘေးမှာရှိတဲ့ တွယ်ဆက် တစ်ရှူးတွေမှာ တုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်နေတာလဲတွေ့ရတယ်။ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကြွက်သားအစိုင်အခဲဟာလဲ ပျက်စီးဖြစ်စဉ်ရှိနေတယ်။ တချို့နေရာမှာ ကြွက်သား ဖိုက်ဘာတွေပျက်စီးသွားပြီး အမာရွတ်ဖြစ်စဉ် ဝင်လာတယ်။
ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆဲလ်ဝိုင်းဝိုင်းသေးသေးလေးတွေကနေ တချို့နေရာတွေမှာ Mononuclear phagocytes အကြီးစားတွေရှိတယ်။ Eosinophils သွေးဖြူဥတမျိုးများများနဲ့ Multinucleate giant cells ဆဲလ်ဧရာမတွေ နည်းနည်းလဲတွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်မျိုးမှာတွေ့ရမဲ့ Neutrophil leucocytes ဆိုတာ နည်းနည်းပါးပါးလေးသာ တွေ့ရတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တက်စေ့တွေမှာလဲ အပြောင်းအလဲတွေ တွေ့သေးတယ်။ ရောဂါဗေဒလို Sinus catarrh လို့ခေါ်တယ်။ Foam cells ဆဲလ်တမျိုးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတာတွေဟာ ဆေးထဲမှာပါနေတဲ့ Procaine penicillin နဲ့ Arachis oil အဆီကြောင့် ဖြစ်တာတွေလို့ ယူဆနိုင်တယ်။ ပနယ်စလင်ကို အဆီလုပ်ထားရတဲ့ သဘောက သွေးထဲစုပ်ယူမှာကိုနှေးစေဘို့ဖြစ်တယ်။ ဆေးက ကြာကြာနေမယ်။ Suspension of calcium penicillin ကို ပျားဖယောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြေပဲဆီနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လုပ်တယ်။
• ကနေ့ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ မှာ တောဈေးသည်တွေ ဈေးရောင်းနေတဲ့ပုံတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ချမ်းချမ်းစီးစီး ရှမ်းအမျိုးသမီးတွေက လိမ်မော်သီးကို မတ်တတ်ရပ်ပြီးရောင်းနေကြတယ်။ ရွာရိုးကိုးပေါက် ရောက်တတ်ရာရာ ကျေးရွာထွက်ကုန်တွေကို တောသူမကြီးငယ်တွေက မြေပေါ်ဖင်ထိုင်ချပြီးရောင်းနေကြတယ်။
• သူများတိုင်းပြည်ကြီးတွေမှာလဲ ‘ဖါးမားမားကက်’ ဆိုတာရှိပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ ‘ဆူပါမားကက်’ တွေမှာ သွားဝယ်ကြရတယ်။ သူများတွေဆီက ဈေးရောင်းချပုံခန်းနား ဆန်းပြားတာတွေတော့ ထူးမပြောချင်ပါ။
• သတင်းထဲမှာ “ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး” ဆိုတာလဲ ဖတ်ရတယ်။ ‘ဆူပါမားကက်’ တွေပေါ်လာလဲ ဆင်းရဲမှု ပျောက်မှာ မဟုတ်သေးပါ။ ဝန်ထမ်းတွေ၊ အမတ်တွေ လစာတိုးပေးမဲ့ဟာကလဲ ဆေးမီးတိုထပ်ပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။
• ရှမ်းမတွေ၊ တောသူမတွေကနေ ပဒေသာပင်စိုက်ချင်ပေမဲ့ မျိုးစေ့မရှိပါ။ မျိုးရအုံးတော့ မိုးမှန်မှသာ အပင်ပေါက်မယ်။ မိုးလေမှန်ချင်ရင် မင်းကောင်းမှဖြစ်သတဲ့။
• ဆင်းရဲမှုပျောက်ဖို့ရာ မင်းဆိုးတွေ ဆင်းပေးရဲမှသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Photo by Sai Zaw Min and Sein Win